Madaxweynaha Djibouti Oo Sheegay In Soomaaliya Iyo Kenya Ku Khasban Yihiin In Ay Wada Shaqeeyaan - #1Araweelo News Network
DJibouti / Somalia / Somaliland / Warar | By admin
Madaxweynaha Djibouti Oo Sheegay In Soomaaliya Iyo Kenya Ku Khasban Yihiin In Ay Wada Shaqeeyaan
“Wixii aan soo aragnay iyo wixii aan qornay ragga Soomaaliyeed may Akhriyin”
#Djibouti(ANN)-Madaxweynaha Dalka Djibouti, ayaa ka hadlay xidhiidhka dawladda Federaalka ee Somaaliya oo dhowaan khilaaf soo dhexgalay, kaddib markii guddi ka socota Urur Gobolleedka IGAD oo xal u raadinayay Khilaafka xumaaday ee Soomaaliya iyo Kenya ay warbixin kasoo saareen.
Warbixintaa oo xukuumadda Federaalka Soomaaliya si xun eedaymo ugu xanbaarisay dawladda uu hoggaamiyo Madaxweynaha Dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle.
Hase yeeshee Madaxweyne Geelle oo markii u horaysay la weydiiyay waxa ay xukuumaddiisu kaga jawaabay dhaleecaynta xukuumadda Soomaaliya ee ka dhalatay warbixinta guddidii booqatay Mandheera oo ah xadka Soomaaliya la wadaagto dalka Kenya dabayaaqadii December, 2020.
Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle, wuxuu arrimahaa iyo kuwo kale kaga hadlay Waraysi uu siiyay Idaacadda BBC, laanteeda Af-soomaaliga.
“Xidhiidhka Soomaaliya iyo Kenya way ku khasban yihiin in ay wada shaqeeyaan, in ay xidhiidh fiican yeeshaan oo ay is is ixtiraamaan.”
Madaxweyne Geelle, wuxuu sheegay in ay lagama maarmaan tahay in ay dadku wax wada qabsadaan oo ay wada noolaadaan sidii ay weligoodba u wada noolaayeen.
AKHRI: Djibouti Oo Guddi Soo Qiimaysa Xiisaadda Muranka Soomaaliya Iyo Kenya
“Khilaafku wuu yimaadaa wuuna baxaa dadkuna waa dad wada dhashay, derisna way yihiin, dadkuna ma guurayo dalkuna ma guurayo” ayuu yidhi, Madaxweynaha Dalka Djibouti oo ka jawaabayay khilaafka Soomaaliya iyo Kenya.
Mar la weydiiyay Madaxweyne Geelle in sababta dawladda Djibouti warbixinteeda ugu xaglisay dhanka Kenya ay la xidhiidho, sida Soomaaliya ku dooday, loo fasirtay in Djibouti ka cadhootay xidhiidhka ay dawladda Federaalka la samaysay Eretria oo aannu xidhiidhka u dhexeeya Djibouti wanaagsanayn.
“ Soomaali iyo Djibouti cid kala kaxayn kartaa ma jirto, guddidana shir madaxeedkii IGAD, dalab uu dalbaday Madaxweynaha Soomaaliya ayay ahayd hawshan, waxaana la yidhi, “idinkaa ugu dhow ee soo eega annaguna waa diidi karaynay. Laakiin walaalnimo na qaaday.” Ayuu yidhi, Madaxweyne oo ku qoslay su’aasha laga weydiiyay arrintaa ee lala xidhiidhay in ay Djibouti ka cadhootay cilaaqaadka dalka Soomalaiya la yeeshay dalka Eritrea.
Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle, wuxuu isagoo la hadlaya jawaabta ay dawladda Soomaaliya ka bixisay warbixinta guddida IGAD, yidhi, “Wixii aan soo aragnay iyo wixii aan qornay ragga soomaaliyeed may akhriyin runtii, mana garanayaan wixii ku dhex jiray arrintaa” ayuu yidhi.
Wuxuuna intaa raaciyay Madaxweyne Geelle in la qabanayo shir madaxeed IGAD ah oo arrintaa lagu faaqidayo, isagoo xusay in ay sidaa ugu qoran tahay warbixinta.
“Ma ganayo sababta arrintaa loo buun-buuniyay, annigu waan iska diiday jawaab iyo waxaas laga bixiyo, sababtoo ah dabka haddii lasii huriyo dhibaato ayuun buu keenayaa.” Ayuu yidhi, Madaxweynaha Dalka Djibouti.
Dhinaca kale, Madaxweyne, Geelle, ayaa ka jawaabay su’aalo la xidhiidha doorashada dalkiisa, cabashada mucaaradka iyo dadka xabsiyada ku jira ee ka mid yahay Fu’aad Yuusuf Cali.
Weriye Bashiir Maxamed Caato oo ka tirsan Idaacadda BBC ee Soomaaliga, ayaa su’aalo kulul weydiiyay Madaxweyne Geelle oo markii shanaad u tartamaya inuu hoggaamiyo dalkaa oo ah ka ugu yar ee ku yaal dalalka geeska Afrika, wuxuna tallada dalka soo hayay tan iyo 1999.
AKHRI: Soomaaliya Oo Djibouti Ugu Baaqday In Raaligelin Laga Bixiyo Warbixinta Laga Soo Saaray Khilaafkii U Dhexeeyay Kenya